फेरि संसद विघटन हुँदै, प्रचण्डले गरे यस्तो घोषणा !
September 22, 2021 N88LeaveaComment on फेरि संसद विघटन हुँदै, प्रचण्डले गरे यस्तो घोषणा !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश फेरि प्रतिगमनतर्फ लाग्न सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले गठबन्धनलाई टुटाएर फेरि प्रतिगमनमा लैजाने खेल भैरहेकाले यस्तो संकेत देखिएको बताएका छन्। उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले फेरि प्रतिनिधिसभा विगठन हुनसक्ने र निर्वाचन घोषणाका लागि तयारी भैरहेको संकेत समेत गरेको छ । जसपा र एमालेबाट माओवादी […]
September 22, 2021 N88LeaveaComment on काे काे बन्दैछन् माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री, नेमलिस्ट फाइनल !
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् । बुधबार पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता महराले आज सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने र बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिएका हुन् । आजको गठबन्धनको बैठकले सरकार सञ्चालन निर्देशिका पारित गर्ने र भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले बताए । […]
‘रूपा सुनारमाथि जातीय विभेद भएको’ भन्दै घरबेटी प्रधानलाई धरौटी तिर्न अदालतको आदेश
September 22, 2021 N88LeaveaComment on ‘रूपा सुनारमाथि जातीय विभेद भएको’ भन्दै घरबेटी प्रधानलाई धरौटी तिर्न अदालतको आदेश
काठमाडाैं । तनहुँकी रूपा सुनारमाथि विभेद गरेको भन्दै बबरमहल बस्ने घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक लाख १५ हजार रूपैयाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश नारायण प्रसाद सुवेदीको इजलासले उनलाई धरौटी तिर्न आदेश दिएको स्रेस्तेदार ज्ञानेन्द्र इटेनीले जानकारी दिए। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रूपा सुनारको मुद्दा केही दिनअघि नै काठमाडौं […]
यस्ता छन् गीताका १८ मुख्य सार
September 22, 2021 N88LeaveaComment on यस्ता छन् गीताका १८ मुख्य सार
काठमाडौं । बाइबल क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ, कोरान मुस्लिम धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ हो । त्यसैगरी, हिन्दु धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ वेद हो । वेद चार वटा छन् ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अर्थर्ववेद । यी चार वेदको निष्कर्ष उपनिषद् ग्रन्थ हो । उपनिषद्बाटै १८ पुराण बनेका हुन् । सबै वेद, उपनिषद् […]
अभिनेत्री प्रियंका कार्की बनिन् आमा
September 22, 2021 N88LeaveaComment on अभिनेत्री प्रियंका कार्की बनिन् आमा
काठमाडाैं । अभिनेत्री प्रियंका कार्की आमा बनेकी छिन् । उनले आजैमात्र छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् । सामाजिक संजालमार्फत प्रियंका र पति आयुष्मान देशराज जोशीले शिशुको तस्विर पोस्ट गरेकी छन् । उनले ‘हाम्रो सानो परी, संसारमा स्वागत छ । हाम्रो जीवनमा स्वागत छ’ भन्दै क्याप्सन लेखेकी छन् । उनले छोरीको नाम आयंका कार्की जोशी राखेकी छन् । […]
प्रचण्ड आफैले भने: ‘हामी माओवादी होइन खाओवादी भैसक्याैँ !
September 22, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्ड आफैले भने: ‘हामी माओवादी होइन खाओवादी भैसक्याैँ !
काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरूलाई जनताले माओवादी होइन खाओवादी भन्न थालेको बताएका छन्। कोटेश्वरस्थित माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा सूर्यनाथ रान यादवको स्मृति दिवसमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले ‘जनयु”द्ध’ र क्रा”न्तिकारी भन्ने कुरा लोगोमा सीमित भएको उल्लेख गरेका छन् । न्यायको लागि ल”ड्ने यो”द्धा […]
September 22, 2021 N88LeaveaComment on परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै नारायण खड्का अमेरिका जाँदै
काठमाडौं । पराष्ट्रमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालेलगत्तै कांग्रेस सांसद डा नारायण खड्का न्यूयोर्क जानु हुने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसको सत्ता गठबन्धनको भएको बैठकले खड्कालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । खड्कालाई बुधबार बिहान नियुक्त गरिने स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरेर आजै पद तथा […]
September 22, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डको पार्टी संग एकीकरण गर्न हाम्रो पार्टीको हैसियत पुग्दैन – रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अहिले माओवादी केन्द्रसंग एकीकरण गर्ने हैसियतमा आफ्नो पार्टी नपुगेको जनाएकी छिन् । रामकुमारी झाँक्रीका अनुसार अहिले नेकपा (एस) बामे सर्ने क्रममा रहेकोले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन सम्म हुनसक्ने तर प्रचण्डको पार्टीसंग एकीकरण गर्ने सम्भव छैन । नेकपा (एस) अहिले सुरुवाती अवस्थामा रहेको तर माओवादी केन्द्र पार्टी स्थापित […]
September 22, 2021 N88LeaveaComment on मन्त्री छनोटबारे काँग्रेसमा असन्तुष्टि, पौडेल पक्षले बोलायो बैठक
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बैठक बोलाएका छ । बुधबार दिउँसो १ बजे महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा पौडेल पक्षको बैठक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ बजेका लागि पदाधिकारी बैठक बोलाएपछि १ बजे पौडेल पक्षको बैठक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री […]
देउवाले चकनाचुर पारिदिए उपेन्द्र यादवको सपना
September 22, 2021 N88LeaveaComment on देउवाले चकनाचुर पारिदिए उपेन्द्र यादवको सपना
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा मतभिन्नता बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आक्रामक रुपमा अघि बढेका छन् । गठबन्धनमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताहरुले आफूलाई बन्थक बनाएपछि असन्तुष्ट देउवा एकाएक एक्सनमा उत्रिएका छन् । देउवाले मंगलबार दुइटा निर्णय गराए । पहिलो अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरु फिर्ता । दोस्रो परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त । दोस्रो निर्णय आफैमा साहसी निर्णय […]